Salaadda lagu daweeyo walaaca. ? La dagaallama walbahaarka iyo niyad -jabka.
3 Akhriska Min
Salaadda si loo daaweeyo walaaca. Welwelku waa dareenka u rogo waxyaabaha wanaagsan ee nolosha oo u roonaaday sababaha welwelka iyo walaaca. Haddii aad tahay qof rumaysad leh ama aad rabto inaad mid noqoto, geli noloshaada maalinlaha ah a duco si loo daaweeyo walaaca. Waxay noqon kartaa daawada ugufiican ee lagula tacaasho daqiiqado hubaal la'aan iyo rajo xumo.
1 Salaadda si loo daaweeyo walaaca
2 Ducada loogu talagalay bogsashada walaaca
3 Tukashada si loo bogsiiyo iimaanka wakhti kasta
4 Ducada si loo daaweeyo walaaca degdega ah
Qeexitaanka sayniska ee sida badan loo adeegsado welwelka waa: "wax aan fiicnayn, mustaqbalka, aan isku dheelitirnayn, xaalad shucuureed oo laga cabsado tayada raaxo darro shucuureed," laakiin ereyadan had iyo jeer maahan inay si dhab ah u muujiyaan sida aad dareemeyso, ma yihiin? ? Laakiin hadda waa inaad isweydiisaa waxa ku walbahaarinaya iyo sida a duco si loo daaweeyo walaaca waad caawin kartaa Maanta, labada sababaha ugu waaweyn ee walwalku waa shaqada iyo xiriirka jacaylka, maaddaama kuwanu yihiin labada qaybood ee nolosha halka aan culeys ka saarno oo aan aad uga baqayno guuldarrooyin. Dhibaatadu ma walwaasho, dhibaatadu waa marka walwal xad dhaaf ah iyo u heellan shaqada iyo xiriirku naga horjoogsadaan inaan helno caafimaad wanaagsan, hurdo wanaagsan oo habeenkii ah iyo xitaa inaan si wanaagsan wax u cunno. Hadda oo aad aad uga warqabto dhibaatadaada iyo sida ay noloshaada u saameynayso, waxaa la joogaa waqtigii aad ku heli lahayd hab aad ku maareyn karto walwalkan oo dhan ee kugu dhex jira! Inbadan waxay raadiyaan daaweyn caafimaad, cilmu-nafsiyaqaanno, laakiin sidoo kale waxaa jira dariiqa hufan ee iimaanka. Waxa kale oo aad raadin kartaa caawimaad caafimaad, laakiin haddii aad sariirta ka kacdid maalin kasta markaad tukanaysid duco si aad u daaweyso walwalka, maalintaadu hubaal waxay noqon doontaa mid fudud, oo leh xasil gudaha iyo dareen dheellitiran.
Ducada loogu talagalay bogsashada walaaca
Sayidow, waxaan aaminsanahay inaad tahay Ilaaha Aabaha Qaadirka ah, Abuuraha cirka iyo dhulkaba. Waxaan aaminsanahay ciise masiix, badbaadiyaha bini aadamka oo dhan. Waxaan rumeysanahay badbaadada rabbaaniga ah ee Eebbe. Sayidow, maanta waxaan weydiisanaynaa nimcada xorriyadda ee walwalka inaga dhex jirta. Magaca Ciise, iga xoree dhibkan murugta leh, iga fogee welwelkaas. Sayidow, xooggaaga xoraynta ah ha sii daayo ruux kasta oo niyad jab ah, kana fogeeya dhammaan xiriirada iyo dhammaan qaababka muujinta walwalka. Bog, Sayidow, halka ay sharkanu degay, xidid dhibaatadan asalka, xusuusta bogsii, calaamadaha taban. Sayidow, Rabbow, hawo farxad weyn ha igu jirto si aan u qalbi qabowsado. Awooddaada iyo magaca Ciise, ku soo kabsad taariikhdayda, taariikhdeyda iyo hadda. Sayidow, iga xoree shar kasta oo dhan, oo in layga bogsiisto oo hoygaaga laga daayo wakhtiyo cidlo ah, dayac iyo diidmo. Waxaan ku reebay awoodda xoreynta Rabbigeenna Ciise Masiix, welwelka, rajo la’aanta, rajo la’aanta, waxaanan ku tiirsanahay xooggiisa, Sayidow, nimcadiisa. Sayidow, i sii, nimcadu inay kaa xoreyso walbahaarka, murugada iyo diiqadda. Aamiin. Mid kale ayaa jira duco si loo daaweeyo walaaca taas oo ka gaaban. Waad ku qori kartaa warqad oo waad sameyn kartaa markasta oo aad walwal dareento:
Tukashada si loo bogsiiyo iimaanka wakhti kasta
«Eebbaha Qaadirka ah, codsi edeb leh iyo iimaan xun. Waxaan kaa codsanayaa xoogaa nabad ah, barakadaada iyo welwelkaaga. Waad ku mahadsan tahay, had iyo jeer waan u mahadcelin doonaa ilaa dhammaadka. Aamiin.
Ducada si loo daaweeyo walaaca degdega ah
Sayidow, kaliya waad ogtahay qalbigayga, sidaa darteed iimaanka iyo is-hoosaysiinta, waxaan kaa baryayaa nimcada inaad barato sidaan kuu soo gudbiyo welwelkayga iyo welwelkayga. Waxaan rabaa inaan nafteyda iska daayo gacmahaaga, aaminaan oo si deggan u sugo ficilkaaga nolosheyda! Badbaadi fikradayda, dareenkeyga iyo dareenkeyga sidaa daraadeed walwal badan kama walwalo. Iga caawi inaan maskaxdayda diirada saaro waxa ii fiican aniga iyo Boqortooyadaada. Quduus ii dhig, si aan u noqdo qof ka buuxsamay Ruuxa Quduuska ah, xasilloonida, xasilloonida iyo nabadda! Xoog i sii si aan shucuurtayda iyo fikirradayda u sii adkeysto anigoo Ilaah aaminay. Sayidow, waad ku mahadsan tahay sababta oo ah waan ogahay inaad daryeelayso. Waxaan isku dayi doonaa in aan raaco tallaabo kasta oo aad i tustid waxay lagama maarmaan u tahay qorshahaaga in aan ku qanco nolosheyda. Waxaan kugu kalsoonahay adiga iyo ereygaaga. Waxaan ku siinayaa welwelkayga iyo welwelkayga. I bogsii dhammaan walaacyada xad dhaafka ah! Waan kugu kalsoonahay oo waan kuu rajaynayaa. Aamiin.
Salaad inay guri iibiso